Ukpa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ndị na-eto eto na-eto eto: ntuziaka maka iji stimulator nke okooko osisi "Bud"
Uto na-akpali akpali, jiri ya mee ihe dịka ntụziaka ahụ si dị, na-enye nanị nsonaazụ dị mma. Ndi oru ugbo amateur amalitela iji ihe ndi na-eme ka ha ghara inwe otutu oge gara aga, kama ha na-akpachi anya. Kedu ihe ndị nwere ọgwụ ndị a, olee otú ha si emetụta osisi ahụ na ọ dị irè? Tụlee ihe atụ nke mkpalite stimulator "Bud".
Olee otú iji merie oria na pests nke ukpa
Ukpa - kesara na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ. Mkpụrụ ya dị elu na calorie na ahụ ike. Fọrọ nke nta ka akụkụ nile nke osisi - epupụta, mgbọrọgwụ, ogbugbo - n'ihi ọdịnaya nke vitamin na mineral nwere ihe ngwọta. Eji ya mee ihe na omenala ọdịnala, omenala. Akwukwo na obere uzo bu ndi mmadu na-aga n'ihu na tebulu kichin di iche iche.
Uru na nsogbu nke walnuts, jiri ọgwụ na cosmetology
A na-eji ukpa na kichin nke ọtụtụ mba. Ntughari nke ngwa nke ukpa di oke obosara na - agbakwunye ya na sweets, salads, pastries, meat, fish and first courses. Na ihe niile n'ihi na ọ bụ isi iyi nke vitamin buru ibu na ọ bara uru maka ahụ mmadụ. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị banyere uru nke walnuts na nsogbu ha nwere ike ịkpata.
Ihe na-agwọ ọrịa nke ndị na-eto ukpa
Ọ bụghị ihe nzuzo na ukpa bụ osisi bara ezigbo uru. Ọtụtụ ndị na-achọ iri mkpụrụ osisi dị ụtọ, ma n'otu oge ahụ, na-eme ka ahụ sie ike, a na-atụfu shea. Na n'efu, n'ihi na ọ bụkwa ihe bara uru ngwaahịa. Ị ga-enwetakwu ihe ọmụma banyere akpịrị mgbọrọgwụ na ukpa na-agwọ ọrịa n'ọdịnihu na isiokwu a.
Na-ehicha ma na-echekwa walnuts n'ụlọ
Ikwanye na ịchekwa walnuts bụ isi ihe dị mkpa iji chekwaa mma nke kernel, nke na-emetụta ọnụ ahịa ngwaahịa ngwaahịa n'ọdịnihu. N'isiokwu a, anyị ga-achọpụta otú ị ga-esi mee ka mmiri dị iche iche dị iche iche na-agbanye na ntanetị n'ọtụtụ ụzọ na n'ụlọ, ma tụleekwa nuances nile nke ịchekwa ihe ndị a kwadebere.
Ojiji nke ukpa green dịka ọgwụ
Ole na ole na-amata uru nke ukpa, ọ bụ ezie na a marawo ọgwụgwọ ya kemgbe oge ochie. Osisi a na-adighi ihe ubi bu ubi ubi ndi Asia, na Caucasus, nke ndi bi na Gris na Ukraine nwere. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na uru nke walnuts, mụta banyere abamuru ya, nyochaa ntụziaka maka nkwadebe na iji ọgwụ na-agwọ ọrịa.
Uru nke walnuts maka ahụ mmadụ
Akpọrọ ma ọ bụ, dịka a na-akpọkwa ya, ukpa eze na-abịa site na Balkans, ma taa, ọdịdị mbara igwe nke ewu ewu ya dị nnọọ ukwuu. A na-asọpụrụ mkpụrụ a karịsịa na USA, China na Central Asia. E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya: ọ nwere mmetụta dị ukwuu na ụbụrụ, mee ka ọrụ nke obi dịkwuo mma, mepụta ebe nchekwa, na-enyere aka ịmepụta ahụ ike.
Akwukwo mmanu: ihe bara uru na ihe ndi ozo, onye ekwesighi iji mee ihe, otu esi eji ya maka ihe eji eme ka odi mma
A na-ekesa ukpa na ụwa dum na Caucasus na mpaghara Eshia Eshia. Mkpụrụ ahụ maara ndị Gris oge ochie na ndị Rom. Na oge gara aga, a na-ewere nri dị ka mkpụrụ nke na-enye amamihe, mmanụ ya bụkwa isi nke àgwà niile bara uru. Isiokwu ahụ ga-atụle ihe mejupụtara, uru na atụmatụ nke mmanụ nke mkpụrụ a.
Ọtụtụ ndị na-eri walnuts na nri n'ihi uto na nri ha, ma ọ bụghị onye ọ bụla maara otú ha si eme ihe n'ahụ nwanyị. N'isiokwu a, anyị na-atụle ihe mejupụtara walnuts, ọnụego kwa ụbọchị nke oriri ha, uru maka ụmụ nwanyị, yana ọgwụ ọgwụ nke ngwaahịa a. Ihe omimi nke walnuts Walnuts ọ bụghị nanị na o nwere uto dị mma, ha nwekwara ọgaranya na vitamin, micro-na macro-elements which are useful for the body, nke a ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu karị.
Esi eto osisi ukpa
Ọ bụ mmadụ ole na ole maara na iji nwee ike ịmalite na-eto eto na mba ọ dịghị mkpa iji nweta mkpụrụ osisi - ọ bụ iji akụ osisi ahụ n'ụzọ ziri ezi. Iji mụta otu esi eme nke a, gụọ ihe onwunwe anyị. Nhọrọ nke ihe na-akụ ihe ma ọ bụrụ na usoro osisi na-eto eto site na mkpụrụ osisi ga-aga nke ọma ga-adabere na nhọrọ nke ikuku ihe.
Mmanụ aṅụ na walnuts: gịnị bụ uzommeputa maka ngwakọta dị egwu maka?
Taa, e nwere ọtụtụ ọgwụ iji dozie nsogbu, igbochi oyi. Ma ha nile sitere na chemicals dị iche iche, ya bụ, bụ ọgwụ na-emepụta ihe. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe mgbakwunye maka ngwaahịa ọgwụ na ịchọrọ iji ngwaahịa nkịtị, ṅaa ntị na walnuts na mmanụ aṅụ, nke ị nwere ike ịmụtakwu banyere nke a.
Akwukwo nke umu rabbits n'ulo
Nkọwa nke nchịkọta ero
Pine sawfly: ndị nkịtị na ndị na-acha uhie uhie